Shwe Mi Industrial Co.,Ltd
Rolls and Bags Package For Foodstuff & Snack
Rolls and Bags Package For Detergent Powder, Soap, Chemical & Phamaceutial Bags.
Rolls and Bags Packages For Longyi, Incense Stick & Cosmetic
Rolls and Bags Packages For Special Requirement (Cold Storage & Vacuum Bags)
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းမျိူးစုံထည့် ထုပ်ပိုးအလိပ်နှင့် အိတ်များ
ဓါတုဗေဒပစ္စည်းနှင့် ဆေးဝါးသုံးပစ္စည်းထည့် ထုပ်ပိုးအလိပ် နှင့် အိတ်များ
ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ခရင်မ်၊ ဆပ်ပြာတုံးထည့် ထုပ်ပိုးအလိပ် နှင့် အိတ်များ
လုံချည်အိတ်နှင့် အထည်ချူပ်အိတ်များ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းထည့် ထုပ်ပိုးအလိပ် နှင့် အိတ်များ
သင်၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့် လိုအပ်ချက်အတိုင်း အမှန်ကန်ဆုံး နှင့် စိတ်တိုင်းအကျဆုံး ပုံနှိပ်ပေးနေပါပြီ။
“No Organization exists without Customers”, as the saying goes, Shwe Mi Industrial Co., Ltd, giving full attention to every single feedbacks from Consumers & Entrepreneurs of Soft Packaging Industry and attempting all the time to upgrade the product quality better & better, so on......
Printing & Slitting Machine
Extrusion Laminating & Dry Laminating Machine
No.49/50, Bahosi Complex, Lanmadaw Tsp., Yangon.
Tel : (95-1) 227624, 09-8650437, 09-73250471, 09-73250472, 09-5135875
Fax : (95-1) 226699
Email : shwemim@yangon.net.mm
No.49, Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Hlaing Thar Yar Industrial Zone(1), Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 684116, 682201, 682149